I-Sonos ibhengeza ngokusemthethweni i-Dolby Atmos kunye ne-Ultra HD Inkxaso ye-Amazon Music | Ndisuka kuMac
I-Sonos ibhengeza ngokusemthethweni iNkxaso yeDolby Atmos kunye ne-Ultra HD evela kwi-Amazon Music
Iindaba ezinkulu zeSonos kukufika kokuhambelana komsindo Ultra HD evela kwiAmazon Music kunye neDolby Atmos Music. Kule meko, inkampani ide ibonelele ngezintlu zomculo ezimbini Ultra HD (amasuntswana angama-24) kunye Umculo weDolby Atmosukuba uzame ezi fomati zeaudio. Kwimeko yam, ndingatsho ukuba indlebe yam ayilungile kwaye ngoko ke nangona kuyinyani ukuba unokuqaphela umahluko kwisandi okanye umgangatho phakathi kwezi zintlu kunye nabanye, akunjalo ukuba akusiyo inzuzo enkulu kum.
Ndiyaqonda ukuba kukho abantu ngakumbi purist yesandi kwaye ezi ntlobo zophuculo ngokuhambelana nokuhambelana nomgangatho weaudio kunokuba luncedo olukhulu kubo. Ukonwabela olu mgangatho womsindo wongeziweyo kwizithethi zakho zeSonos, kufuneka ube ne Bhalisela kwiAmazon Music Unlimited kwaye ukhuphele isoftware yeSonos yamva nje.
I-Ultra HD evela kuMculo weAmazon kunye noMculo weDolby Atmos: I-Sonos ngoku ixhasa iaudio ye-Ultra HD evela kuMculo weAmazon, ukuze ukwazi ukumamela iingoma ezingalahlekanga zeaudio ukuya kuthi ga kwi-24-bit / 48kHz kwizithethi zeSonos, kunye noMculo weDolby Atmos. Iaudio ye-Ultra HD evela kuMculo weAmazon kunye neDolby Atmos Music ziyafumaneka kwiSonos eUnited States, eCanada, eUnited Kingdom, eJamani, eFransi, eItali, eSpain naseJapan. Umculo weDolby Atmos uxhasa iArc kunye neBeam (Gen 2); Ungafumana uluhlu olupheleleyo lweemveliso zeSonos S2 ezihambelana neAmazon Music Ultra HD Apha.
Umgangatho weaudio yomculo kwiscreen esiDlalwayo ngoku+
Ukumamela izintlu ezikolu mgangatho kukwayimfuneko ukukhuphela isoftware yeSonos kwiapp. Ukwenza oku, sisuka siye kwisicelo ngokwaso kwisixhobo sethu kwaye ucofe ku: Useto> Inkqubo> Uhlaziyo lweSistim> Jonga uhlaziyo. Xa sikhuphele isoftware sinako ukonwabela umculo okumgangatho ophezulu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iikhompyuter zeMac » Izixhobo » I-Sonos ibhengeza ngokusemthethweni iNkxaso yeDolby Atmos kunye ne-Ultra HD evela kwi-Amazon Music
Inguqulo yesibini yokukhupha umviwa we-macOS Monterey 12.1 ekhutshelwe abaphuhlisi
Uyenza njani kwaye Yabelana ngenethiwekhi yeWi-Fi yeMac kunye nezinye izixhobo